Pakistan: dab qabsaday Tareen oo sababay dhimasho & dhaawacyo – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Pakistan: dab qabsaday Tareen oo sababay dhimasho & dhaawacyo
Pakistan: dab qabsaday Tareen oo sababay dhimasho & dhaawacyo
ugu yaraan 60-ruux ayaa dhimatay,in ka badan 40-na waxaa soo gaaray dhaawacyo ka dib markii dab ka dashay gaas uu hareeyay Tariin ku safraayey bartanaha dalka Pakistan.
Shilkaasi ayaa maanta ka dhacay agagaarka deegaanka Liaquatpur, oo 150-km u jirta magaaladaMultan,sida uu xaqiijiyay Wasiirka Gaadiidka Tareenada Sheikh Rashid Ahmed oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinada.
Dabka ayaa dhacay markii dad rakaab ah ay isku dayeen in ay qurac ku sameystaan foornada lagu qaato gacanta ee ku shaqeysa gaaska,halkaasi oo qarax ka dhashay uu sababay dab ku faafay gudaha Tareenka.
Tareenka ayaa siday rakaab ka yimid koonfurta magaalada Karachi ,kuna socdayRawalpindi,waxaana dadkii uu soo gaaray dhaawaca daran ee gubashada loo diyaariyay diyaarado Herikobtar ah oo lagu geeyo cisbitaalada la tacaala dabka.
Previous articleMadaxda sare ee Qaranka oo mushaarkoodi Bishaan Oct u jaray gurmadka fatahaadaha
Next articleHindiya oo Shaacisay Inay Somaliland ka Taageerayso Qalabeynta Cisbitaalada
4 qof oo laga helay covid 19 D.D.somalida itoobiya, 9 xaaladood...
Nabadoon, Jawaab kulul ka Bixiyey hadalkii Wasiir maareeye gefkii uu beesha...